Amakhadi asebhange akhokhelwa kusengaphambili angelinye lama izindlela ezingcono kakhulu zokuthenga ku-inthanethi, khawula ukusetshenziswa kwemali esifuna ukukusebenzisa nyanga zonke ngobusuku bethu bokuphuma, ekuthengeni okuhlukahlukene, lapho sithatha uhambo, ekubhaliseni ... njengoba ngale ndlela, uma ibhalansi etholakalayo isiphelile, asikwazi ukusebenzisa imali eyengeziwe, hhayi njengoba kwenzeka ngamakhadi esikweletu noma asebhange.
Emakethe singathola inombolo enkulu yamakhadi alolu hlobo, noma kunjalo, akuwona wonke asinika izinzuzo ezifanayo. Kulesi sihloko sizogxila ku- ikhadi le-hype, ikhadi elikhokhelwa ngaphambili elinemisebenzi eminingi etholakala e-Italy. Uma ufuna ukwazi ukuthi uyishaja kanjani kabusha i-Hype, ngikumema ukuthi uqhubeke nokufunda ukuze wazi zonke izindlela ezitholakalayo.
Ungayifaka kanjani kabusha i-Hype
Ngaphambi kokukhetha ikhadi elilodwa elikhokhelwa ngaphambili noma elinye, kubalulekile wazi zonke izinketho zokushajwa kabusha abasinika zona.
Njengekhadi elihle elikhokhelwa ngaphambili eliwufanele usawoti walo, I-Hype isinika izindlela ezahlukene ukuze ukwazi ukushaja kabusha ibhalansi yekhadi elikhokhelwa kuqala.
Kuye ngokuthi yiziphi izinto esizithandayo nezidingo zethu, kanye nezindlela ezahlukene esinazo, singakwazi shaja kabusha ikhadi lethu le-Hype elikhokhelwa ngaphambili ngezindlela ezi-4 ezihlukene: usebenzisa elinye ikhadi lesikweletu noma lasebhange, ukudlulisa imali nge-akhawunti yokuhlola, usebenzisa umsebenzi wokushajwa kabusha otholakala kuma-ATM anikwe amandla noma ucela imali komunye oxhumana naye we-HYPE.
Konke ukuqoqwa kwemali esikwenza ekhadini le-Hype elikhokhelwa kuqala, inekhomishini ye-2,50 euros, ama-euro angu-2 uma sine-Hype Plus evuliwe kanye nama-euro angu-1,60 uma sine-Hype Premium evuliwe. Futhi, ngezindlela eziningi ezitholakalayo, inani elincane lokukhokhiswa kabusha ngama-euro angama-20, nakuba leli nani lingahluka njengoba lingalungisiwe.
Ukuthola ulwazi oluthe xaxa Ngiyakumema ukuthi uqhubeke nokufunda mayelana nenye yezindlela ezahlukene ezitholakalayo zokushajwa kabusha amakhadi akhokhelwa i-Hype.
Indlela eshesha kakhulu futhi elula yokushajwa kabusha ikhadi le-Hype elibolekiwe iwukuba Uhlelo lokusebenza lweselula lwe-Hype, uhlelo lokusebenza esingalulanda mahhala ku-App Store, i-Google Play Isitolo nakugalari yohlelo lokusebenza.
Uma sesinakho ilandiwe futhi yafakwa uhlelo lokusebenza Ku-smartphone noma kuthebhulethi yethu, kufanele sifake imininingwane ye-akhawunti yethu.
Okulandelayo, kufanele hlanganisa ikhadi lesikweletu noma lasebhange, ikhadi lesikweletu noma lasebhange elizogcinwa esicelweni futhi esingalisebenzisa njalo ukuze sigcwalise ikhadi le-Hype elikhokhelwa ngaphambili.
Njengamanye amakhadi akhokhelwa ngaphambili, i-Hype iyasivumela ukwenza ama-recharges ngesikhathi noma sungula uhlelo lwe ukugcwalisa okuzenzakalelayo yeka ukuthi isonto ngalinye, njalo ezinsukwini eziyi-15 noma kanye ngenyanga, kwenziwa ukushajwa kabusha okuzenzakalelayo kwenani esilisungulile.
Wonke amakhadi we-Hype ehambisana ne-IBAN. Lokhu kuvumela abasebenzisi ukuthi bathumele imali yebhange emakhadini abo akhokhelwa kuqala kalula futhi ngaphandle kwesidingo sekhadi lesikweletu lasebhange noma ledebhithi, yingakho lezi zinhlobo zamakhadi zilula kakhulu ukulawula ukusetshenziswa kwemali.
Inombolo ye-IBAN yekhadi elikhokhelwa ngaphambili le-Hype, itholakala ngohlelo lwe-Hype lwamadivayisi eselula ngaphezu kwalokho, emibhalweni ethunyelwa kubasebenzisi abakha ikhadi elisha, imibhalo, ezimweni eziningi, elahlekile, ngakho-ke singahlala sinayo ngohlelo lokusebenza.
Ngokungafani nokushajwa kabusha kusetshenziswa ikhadi lesikweletu, ikhadi le-Hype elikhokhelwa kuqala lishaja kabusha ngokudluliswa, thatha phakathi kwezinsuku eziyi-2 nezili-3 ukuze isebenze kahle, kuya ngokuthi yenziwa ngempelasonto, iholidi lomphakathi ...
Nakulokhu, indlela elula yokugcwalisa ikhadi le-Hype elibolekiwe, ngaphandle kokusebenzisa uhlelo lokusebenza lweselula, yile usebenzisa i-ATM ngekhadi lasebhange elivela kunoma yiliphi elinye ibhange, isikweletu noma idebhithi.
Le nqubo izodlulisela imali ekhadini lethu lesikweletu noma lasebhange iye ekhadini elikhokhelwa ngaphambili le-Hype. Ngokushesha. Lo msebenzi utholakala kuma-ATM angaphezu kuka-8.000 asatshalaliswa kulo lonke elase-Italy ayingxenye ye-QuiMultiBanca.
Kusukela ezikhungweni ezigunyaziwe
Uma singafuni ukusebenzisa ikhadi lethu lesikweletu, idebhithi noma i-ATM, singasebenzisa elinye lamabhizinisi ahlobene ahlukene lapho, ngaphezu kokuthengisa amakhadi akhokhelwa ngaphambili e-Hype, singasebenzisa futhi kusivumela ukuthi siwashaje kabusha.
Ngaphezu kwabaningi izitokofela, osogwayi namabha, singaphinda sishaje ibhalansi yekhadi lethu le-Hype ngezitolo Carrefour, Penny Market, PAM supermarkets, Pam Local ...
Ukushajwa kabusha okuncane esingakwenza ngale ndlela ngama-euro angama-20 kanye ne-a ubuningi bama-euro angama-250.
Njenge-PayPal, i-Hype, iyasivumela cela imali kusuka kwabanye abantu ngohlelo lokusebenza. Okusho ukuthi, singacela imali kwabanye abasebenzisi baleli khadi elikhokhelwa ngaphambili, ngokuya ngokuthengiswa kwezinsizakalo, amakhomishini, izinkokhelo zamasonto onke, ama-biweekly noma nyanga zonke ...
Inqubo yokucela imali ngesicelo, kungakhathaliseki ukuthi ivela kumngane, ilungu lomndeni noma kubazali bethu, ilula njengokuvula isicelo bese uchofoza isithonjana sethikithi esitholakala engxenyeni emaphakathi yesicelo futhi chofoza ku-Richiedi denaro.
Ngemuva kwalokho sizobhala inani lemali esifisa ukuyithola futhi esigabeni se-Invia A, sikhetha othintana naye esimeme ngaphambilini njengomthombo wemali engenayo. Uma singayigcini kuhlelo lokusebenza, chofoza uphawu + bese ubhala isiteketiso somsebenzisi.
Umsebenzisi othola isimemo kuzodingeka ukuthi achofoze kuso, afake isicelo bese eqhubeka nokuthumela. Lapho imali itholwa, Sizothola isaziso ku-smartphone yethu.
Ungabheka kanjani ibhalansi yekhadi elikhokhelwa ngaphambili le-Hype
Kanye nokwazi izindlela ezahlukene zokukwazi ukushajwa kabusha ikhadi le-Hype elibolekiwe, elinye iphuzu elibalulekile okufanele silicabangele izindlela elenza litholakale kithi yazi ibhalansi yekhadi lethu.
Njenganoma yiliphi elinye ikhadi lalolu hlobo, indlela esheshayo nelula kakhulu ngohlelo lokusebenza lwesakhiwo seselula. Lapho nje uvula uhlelo lokusebenza, ulwazi lokuqala oluzoboniswa kuzoba lolo bhalansi etholakalayo.
Phezulu kuselula » Amabhange » Gcwalisa ikhadi elikhokhelwa ngaphambili le-Hype